Remote Touchpad: shandisa nharembozha yako sekubata padhi rePC yako | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nguva, iwe unogona kukuwana kusanzwisisika kushandisa komputa yako keyboard kana mbeva / touchpad kubata yako Linux distro. Kana, zvinogona kutoitika izvozvo chako chekubata yamira kushanda palaptop yako, uye unofanirwa kuenderera nebasa rako pasina kukundikana. Mune izvo zviitiko, kune akati wandei zviwanikwa zvaunogona kushandisa.
Kune rimwe divi, iwe zvakare ungangoda kushandisa yako desktop kana laptop PC kubva kunyaradzo yemubhedha wako kana pasofa, kunyanya izvozvi kuti teleworking yawedzera. Kana zvirizvo, zvirokwazvo iwe uchada kuziva iyo Remote Touchpad app, software iyo inokutendera iwe kushandura iyo bata chidzitiro chenharembozha yako kana piritsi sekunge yaive bata rekubata.
Imwe poindi inotsigira Remote Touchpad ndeyekuti ichakubatsira iwe kuita isina waya yekubata padhi iwe usina waya isina mbeva. Nekudaro, kana iwe uchida kunakirwa neyakareruka yeasina kufamba inofamba, unogona kugadzirisa isina waya mbeva nekutenda kuchirongwa ichi.
Remote Touchpad inogona kuiswa nyore nyore kubva kuchitoro cheapp ye distro yako kana kushandisa yako yaunofarira package package. Zvakare inowanikwa mune yakapusa pasuru package Flatpak kubva pano. Pane imwe yaiswa, iwe uchaona kuti iri nyore kwazvo app, yakavhurwa sosi, yemahara, uye kuti inoshanda zvakakwana paLinux ne Tsigiro yeX11.
Paunenge iwe uine iyo app yaiswa pane yako yaunofarira distro, iwe unovhura iyo app uye kana iwe uchimhanyisa iyo, a URL uye kodhi yeQR kuti iwe utore nefoni yako. Neimwe yesarudzo mbiri idzi, unozokwanisa kuwana sarudzo dzinozovhura mubrowser yenhare mbozha, pasina chikonzero chechero chinhu.
Paunenge uchinge uri mukati, iwe uchaona kuti muwebhu browser yefaira yako uchaona iyo interface yeapp senge iri yekugunun'una kuitira kuti ugone kushandisa PC yako kubva pairi uchishandisa yako yekubata skrini hapana kudikanwa kwetambo. Zvese kuburikidza nehunyanzvi hweBluetooth iyo, zvechokwadi, inofanirwa kutsigirwa kuti ishande ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Remote Touchpad: shandisa nharembozha yako sekubata padhi rePC yako